Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan attamiin yadatama? - BBC News Afaan Oromoo
Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan Dilbata tare eebba 'hoteelaa' irratti dhukaasa gammachuuf dhukaafamaa tureen ajjeefameera.
Seenaa gabaabaa wallisaa kanaa BBC'n maddeen garaagaraa irraa odeeffatee akka ittaanu kanatti dhiyeesseera.
Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Jaarraa Gooroo bakka Buuyyamaa jedhamutti dhalate.
Innis haadha isaa aadde Likkee Damissee fi abbaa isaa Obbo Galaan Wadaajoo irraa ALI bara 1968 tti ture kan dhalate.
Barnoota kutaa tokkooffaatii hanga sadarkaa lammaffaatti naannoodhuma dhalootasaa fi magaala Bishooftuutti barate.
Daadhiin akkuma ijoollee baadiyyaatti dhalatan kan biroo, ijoollummaasaatti loon tiksaafi maatiisaa hojiidhaan gargaaraa guddate.
Booda keessas fedhiin aartiif qabu ijoollummaasaatii jalqabee dabalaa waan dhufeef, yeroo mana barnootaa turetti gumii dargaggootaa Afaan Oromoo hundeessuun walaloo fi diraamaawwan garagaraas hojjechaa turusaan maddeen ni dubbatu.
Skip Youtube post by friendsictsolution
End of Youtube post by friendsictsolution
Hiriyoonni isa waliin baratan akka jedhanitti, Daadhiin sirbootaafi diraamaawwan hojjetu keessatti cunqursaa Oromoorra gahu akka muldhisutti waan hojjetuuf yeroo hedduu reebichaa fi hidhaaf saaxilamaa ture.
Yeroo hedduus kitaabota seenaa dubbisuu fi maanguddootarraa seenaa qorachuun nama dabarsudha.
Bara 2007'tti ammoo kitaabasaa jalqabaa 'Aangoo Sanyiin dhaalan' jedhu barreessee uummataan gahe. Kitaabni kunis seenaa ummata Oromoo, wareegama ummatichi gabrummaa qolachuuf taasise, walumaagalattis seenaa gaggabaabaa 137 of kan ofkeessatti kan hammatedha.
Bara 2011 kanattis kitaaba seenaa mata dureensaa 'Boolla nugusa nyaate' jedhu dubbistootaaf gumaacheera. Kitaabni 'yaadannoo jaallanii (Liiban Liibiyaa taate') jedhus gumaata aartii isaa kan biraati.
Sirboota baaqqee fi albamootas gumaachuun guddina aartii Oromootiif dhama'aa tureera. Daadhin weellisaa, barreessaa, akkasumas walaloo fi yeedaloos qopheessuun beekama.
Vidiyoo fi sagaleedhaan sirboota 15 ol ummataan kan gahe yoo ta'u, sirboota akka:
-boottii jilbaa jabaa maaltu jibba
-Imimmaan hiyyeessaa jedhaniin hedduu beekamtii horate.
Sirboota isaa hedduufis walaloo fi yeedaloo qopheessaa kan ture ofumaafi. Artiist Daadhiin seenaa qoratu malee hin barreessus hin sirbus jedhu hiriyoonni dhiyeenyan isa beekan.
Goodayyaa suuraa Artist Daadhii Galaan sirboota 'Roorroo Jibbine' fi 'Gaaffin Qaba? jedhamaniin gurra horateera
Halkan kitaaba dubbisuu akka jaalatuufii yeroo dhihoo asittimmoo hojii qonna jallisii irratti hirmaachuunis jireenya injifachuuf nama dhama'aa turedha.
Sirba isaa 'imimmaan hiyyeessaa jedhu keessattis-
-'Meeqatu lafa isaa dhabee rakkate,
-Warshaan dureessaa lafa ormaa fudhate,
-Imimmaan hiyyeessaa cubbuu qaba,
-Maayis namuu ni dhaqaba' jechuun miidhama qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buqqa'anii aartiidhaan namaaf ibseedha.Qabsaa'ota Oromoo achii buuteen isaanii dhabameefis sirba 'Gaaffiin qaba' jedhu dhiheenya kanatti ummataan gahee ture.
'Gaaffiin qabaa, ammas Gaaffiin qaba
Garaa gubannee Nadhii Gammadaa sidhabnee' jechuun weellise.
Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan Gurraandhala 4 bara 2011'tti aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka Ashuffee jedhamutti sagantaa eebba hoteelaa irratti rasaasa gammachuuf dhukaafameen rukutamee umuriisaa waggaa 43tti du'aan boqote.
Sirni awwaalchaa isaas Gurraandhala ALI 6, bara 2011'tti bakka artistoonni fi dinqisiifattoonnisaa argamanitti aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaatti raawwatame.